Haddii aad xanuunsato muddo ka badan maalin
Haddii aad xanuunsantahay in toddoba maalin ka badan oo aadna ka qeyb qaadan karin hawlahaaga wax qabadka waa in aad noo keentaa caddeyn dhakhtar. Waxaad u baahantahay in aad keentid caddayn dhakhtar iyadoon taas loo eegeyn in aad si buuxda u xanuunsaneyd iyo in aad maalinta qeyb ka mid ah xanuunsaneyd.
Si kaalmadaada lacageed laguu sii siiyo waxaad u baahantahay in aad noo keentid caddeyn dhakhtar. Caddeynta dhakhtarku waa in ay muujiso in aadan ka qeyb qaadan karin barnaamijkaaga iyo ilaa inta aadan baaxad ahaan ka qeyb qaadan karin. Maskaxda ku hay in aad u sheegtid dhakhtarkaaga
in aad barnaamij ka qeyb qaadaneysid
waxyaabaha kala duduwan ee aad barnaamijka ku qabatid, tusaale ahaan hawlo shaqo raadin, waxbarasho xagga suuqa shaqada ah, tababar shaqo, SFI
inta saacadood ee aad ka qeyb qaadatid barnaamijka - haddii aadan ogeyn waxaa iska qiyaasi kartaa saacaduhu inta ay yihiin
waxa aad adiga naftirkaagu u maleyneysid in aadan xanuunka ama dhaawaca dartiis barnaamijka ku sameyn karin
Ka codso magdhabid laga helo Qasnada Caymiska
Waxaad kaalmada lacageed ka codsaneysaa Qasnadda ceymiska. Codsigaaga waxaad ku qoreysaa maalmihi aad xanuunsaneyd oo aadan ka qeyb qaadan barnaamijka. Macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan sida aad joornaatada bukaanka ku codsan kartid waxaad ka heleysaa barta intarneetka ee Qasnadda ceymiska.
Caddeynta dhakhtarka noo soo dir
Caddeynta dhakhtarka waxaad noogu soo direysaa
Macluumaadka khaanadda ku jira tusi dhakhtarka haddii aad u baahantihid caddeyn dhakhtar
Bukaanku wuxuu Xafiiska shaqada uga qeyb qaataa barnaamij. Bukaanka waxaa lagu boorriyay in uu booqashada dhakhtarka ka hor isu diyaariyo hawlo ku aaddan
hawlo barnaamijka ku jira
waxa uu bukaanku u maleyneysid in uu xanuunkiisa ama dhaawaciisa dartiis barnaamijka ku sameyn karin
Marka bukaanku uu ka qeyb qaadanayo barnaamij waa in aad isticmaashaa caddeynta dhakhtarka AF00251.
Caddeynta waxaad ka heleysaa bogga arbetsformedlingen.se/varden.
Du hittar intyget på arbetsformedlingen.se/varden
Haddii aad xanuunsato muddo ka badan 30 maalin
Haddii aad si buuxda u xanuunsantihid in ka badan 30 maalmood, oo aanan sinaba barnaamijkaaga kuu waafajin karin si aad uga qeyb qaadatid, waan kaa saareynaa barnaamijka. Lacagta joornaatada bukaanka waxaad ka codsan kartaa Qasnadda ceymiska maalinta ugu horreysa ee lagaa saaro meesha. Si aad joornaato bukaan u codsatid waxaad u baahantahay in aad dhakhtarkaaga ka dalbatid caddeynta dhakhtarka ee Qasnadda ceymiska, una geysid caddayntaas dhakhtarka Qasnadda ceymiska.
Haddii aad barnaamijkaaga ka barbar shaqeysid
Haddii aad barnaamijkaaga ka barbar shaqeysid oo aad dooneysid mushaar bukaan ama joornaato bukaan waxaad u baahantahay in aad dhakhtarka ka dalbatid laba caddeymood. Mid aad u geyneysid shaqa bixiyahaaga iyo mid kale oo aad annaga noo keeneysid. Waxaa taas sabab u ah in lagaaga baahanyahay caddeyn dhakhtar oo gaar ah marka aad barnaamij ku qorantihid. Shaqa bixiyahaaga kala hadal wixii macluumaad ah oo dheeraad ah oo ku aaddan waxa ay u baahanyihiin.